Tag: kalkuleylka internetka | Martech Zone
Tag: xisaabiyaha internetka
Sameynta sahan iyo hubinta inaad heysato jawaab sax ah oo aad ku saleyn karto go'aanadaada ganacsi waxay u baahan tahay xoogaa khibrad ah. Marka hore, waa inaad hubisaa in su'aalahaaga lagu weydiiyo qaab aan u eexanayn jawaabta. Ta labaad, waa inaad hubisaa inaad sahamiso dad kugu filan si aad u hesho natiijo tirakoob ahaan sax ah. Uma baahnid inaad wax weydiiso qof walba, tani waxay noqon doontaa mid xoog badan oo aad qaali u ah. Shirkadaha cilmi baarista ee suuqa